mairie-antananarivo – FUTSAL karakarain’ny CUA: Ny 21 septambra izao ny lalao famaranana
FUTSAL karakarain’ny CUA: Ny 21 septambra izao ny lalao famaranana
administrateur 14 septambra 2018 Commentaires fermés
Ny zoma 21 septambra ho avy izao no hotontosaina ao amin’ny kianja Mitafon’i Mahamasina ny famaranana ny lalao foot à 7 fantatra amin’ny anarana hoe FUTSAL, izay karakarain’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Lalao maromaro no ho hita ao mandritra izany ; hanombohana ny hetsika ny dihy mirindra Zumba. Aorian’izay ny fiadiana ny laharana faha-3 fair-play na ny 3ème place fair-play, ka ny DTMU hifandona amin’ny 5è Arrondissement, arahin’ny fiadiana ny laharana faha-3 na ny 3ème place, hikatrohan’ny DCVC SPORT sy ny DRH.
Manarak’izany ny lalao famaranana fair-play, ny 4è Arrondissement hifandona amin’ny ESPACE VERT. Avy eo ny lalao famaranana lehibe ho amin’ny tompon-daka, ny 1er Arrondissement hifampitady amin’ny Polisy Monisipaly. Hisy ny fizarana medaly sy amboara ho an’ireo rehetra mendrika mandritra ireo lalao ireo, hiatrika izany famaranana ny lalao FUTSAL izany ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana.
AO ANATY » Kolontsaina